Sky Dancer Run - Running Game 4.0.10 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 4.0.10 လြန္ခဲ့ေသာ2လက
ဂိမ္းမ်ား စြန္႕စားခန္း Sky Dancer Run - Running Game
Sky Dancer Run - Running Game ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
အဆိုပါထူးခြားသောပြေးဂိမ်းကို Google Play ကနေ "ANDROID Excel GAME" ရရှိ။
THE parkour တော်လှန်ရေးဒီမှာ IS
ကြီးမားတဲ့ကျောက်သားရှောင်ရှားနေချိန်တွင်, တယောက်ကိုတယောက်ပျံသန်းကျွန်းကနေအန္တရာယ်ရှိသောကမ်းပါးကိုဖြတ်ပြီးပြေးခုန်။ သငျသညျလျောက်ပတ်သည့်အဆုံးမဲ့အနက်ဆုံးသောတွင်းရိုက်နှက်ဖို့ကြိုးစားနေမိုဃ်းတိမ်နှင့်မြေယာမှတဆင့် run အဖြစ်ငှက်ကဲ့သို့အခမဲ့ခံစားရသည်။ နေ့ရက်ကာလအဘို့အရာအမျက်ဒေါသမုန်တိုင်းများမှရှင်းရှင်းလင်းလင်းမိုးကောင်းကင်ကနေမတူညီတဲ့ရာသီဥတုအခြေအနေများအပေါငျးတို့သအန္တရာယ်ရှိတဲ့အနေအထားအောင်နိုင်။
သင်သည်ထိုပါးခုန်ယူအဖြစ်ချပေးသည့် adrenaline, အသက်ပြင်းပြင်းရှူပါအာရုံစူးစိုက်ခြင်းနှင့်ခံစားရသည်။ အတွေ့အကြုံပထမဦးဆုံးမှာကြောက်လန့်ခြင်းနှင့်လွန်ပြီးအိမ်မက်ဆန်ထင်ပေမယ့်မကြာမီသငျသညျအသီးအသီးအခမဲ့ကျဆုံးခြင်းပြော့နဲ့အားမစိုက်ရရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်။
WHAT ကို SKY dancer RUN ကြောက်မက်ဘွယ်သော Runners စေသည်?
* အခမဲ့ကျဆင်းလာ! က Sky ကချေသည် Run ကိုကျဆင်းပြေးအဖြစ်နည်းတူအရေးကြီးပါသည်ဘယ်မှာအသစ်တစ်ခုကိုပြေးသမားပါ! မိုဃ်းကောင်းကင်ကနေကျဆုံးခံစားရပြီးလိုလားတဲ့ကဲ့သို့သောစုံလင်သောဆင်းသက်စေ!
* တစ် daredevil သဘောထားကိုနှင့်အတူတစ်ဦးကစတိုင်ပြေးဂိမ်း! ဒါဟာအပြင်းထန်ဆုံးစိန်ခေါ်မှုထုတ်လုပ်ကြောင်း # 1 မဖြစ်နိုင်ပြေးသမားဂိမ်းပဲ!
* က Sky ကချေသည် Run ကို, သင်ကြီးမား, ရတာဟာ, မဖြစ်နိုင်တာ, action ကိုရုပ်ရှင်စတိုင်ခုန်-နှင့်ယူသင်သည်ဝေးအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောကြောင့် platform ပေါ်တွင်ဆင်းသက်ဖို့ကျွမ်းကျင်မှုရရှိပါသည်ဆုတောင်းကြလော့။
* ထိုဂရပ်ဖစ်များနှင့်ထိန်းချုပ်မှုလှလှပပရိုးရှင်းသောသော်လည်း, အဘယျသို့ကယ့်ကိုသငျသညျရရှိသွားတဲ့အဖန်ဖန်မဖြစ်နိုင် Feat ချွတ်ဆွဲသည်။
* အဖြစ်ဝေးသင်ပေမယ့်တစ်စက်ထွက်သည်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်အဖြစ် Run! က Sky ကချေသည်၏ဤအကြီးမြတ်ဆုံးအာကာသစွန့်စားမှုပေါ်မှာငါတို့သိပ်ပြီးနှင့် Jumper Join!
* က CNET နေဖြင့် 2017 အတွက်အကောင်းဆုံးမိုဘိုင်းဂိမ်းထဲမှာ Featured ။
* က Sky ကချေသည် Download and Play ဖို့အကောင်းဆုံးအခမဲ့အပြေးဂိမ်း ONE ပါ! အားလုံး In-app ကိုထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများလုံးဝ optional ကိုများမှာ! သင်အခုအအေးဆုံးပြေးသမားကိုစိန်ခေါ်ဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်ပါသလား
တစ်ဦးက DAREDEVIL BE နှင့်ခုန်ဝံ့
Sky Dancer Run - Running Game အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Sky Dancer Run - Running Game အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Sky Dancer Run - Running Game အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
Sky Dancer Run - Running Game အား အခ်က္ျပပါ
premiumapp စတိုး 2.27k 3.2M
Sky Dancer Run - Running Game ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Sky Dancer Run - Running Game အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 4.0.10
ထုတ်လုပ်သူ Pine Entertainment
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ https://www.topebox.com/privacy-policy
App Name: Sky Dancer Run - Running Game
File Size: 235.84MB
Release date: 2019-06-27 05:23:48
လက်မှတ် SHA1: 91:2F:65:28:69:54:15:54:3D:7F:59:22:0E:8E:8B:46:11:AB:4D:87
ထုတ်လုပ်သူ (CN): Pine Entertainment
အဖွဲ့အစည်း (O): Pine Entertainment
နယ်မြေ (L): HCMC
ပြည်နယ်/မြို့တော် (ST): Govap
Sky Dancer Run - Running Game APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ